မနေ့ညကထွက်ရှိတဲ့ “Ant-man and the Wasp” trailer မှာ Hyundai 2019 Veloster ကိုသတိထားမိကြရဲ့လား! – AutoMyanmar
“Ant-man and the Wasp” အမည်ရှိတဲ့ Marvel studio ကဇာတ်ကားတစ်ခုမှာ Hyundai ရဲ့ 2019 Veloster ပါဝင်လာမယ့်အကြောင်းကိုတော့ ဇန်နဝါရီလလယ်လောက်က Automyanmar မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Ant-man and the Wasp” trailer မှာတောင် စက္ကန့်ပိုင်းလောက်လေး 2019 Veloster ကြီးပါဝင်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့သိရှိထားတဲ့ သတင်းဟာမှန်ကန်နေပါပြီ။
A screenshot from “Ant-man and the Wasp” trailer
Hyundai ရဲ့ 2019 Veloster အသစ်ကြီးကိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်ကျော်လောက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ 2018 Detroit Motor Show မှာမိတ်ဆက်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Hyundai အနေနဲ့ Veloster First generation ကို ၂၀၁၁ မတ်လက တောင်ကိုရီးယားမှာစတင်ရောင်းချခဲ့တာပါ။ First generation Veloster ကိုလည်း Detroit Motor Show မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၁ ကစပြီး Hyundai ဟာ Veloster ကို Edition အသစ်တွေ၊ Model အသစ်တွေဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ အခု ၂၀၁၈ မှာ 2019 Veloster အထိထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 2018 Detroit Motor Show မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Hyundai 2019 Veloster ကြီးကတော့ ???
Hyundai Veloster ရဲ့ထူးခြားချက် အရှေ့တံခါးနှစ်ခုကကြီးနေပြီး အနောက်တံခါးကသေးနေတာပါ။ အဲ့ဒီထူးခြားချက် ၂၀၁၁ မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Veloster first generation ကတည်းကပါ။ နည်းပညာအသစ်တွေပါဝင်လာပေမယ့် ရိုးရာကမပျက်သွားဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ “Ant-man and the Wasp” ဇာတ်ကားကောင်းကြီးမှာ Hyundai ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လှမ်းကပါဝင်ထားတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ ဒီစာကိုရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Trailer ကိုလမ်းကြုံရင်ဝင်ကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။ လမ်းထပ်ကြုံရင် Trailer မှာပါတဲ့ Ghost ရဲ့အကြောင်းကို ကွန်းမန့်မှာသိသောသူများရှင်းပြသွားပါဉီး။ ?
Real Heroes Not Actual Size!